Uyivula njani ifayile yePDF | Iindaba zeGajethi
Okwexeshana ngoku, eyona fomathi yefayile isetyenziswayo ekwabelaneni ngamaxwebhu yiPDF, ifomathi esivumela ukuba sithumele amaxwebhu ukuthintela ukuba aguqulwe apha endleleni, kubandakanya nokutyikitywa kunye nokubanakho ukongeza nantoni na. yenza ukuba ibe yeyona fomathi ifanelekileyo yokwabelana ngezivumelwano zorhwebo okanye umxholo onelungelo lokushicilela. Kuxhomekeka kumniki woxwebhu, kusenokwenzeka ukuba uxwebhu lukhuselwe ukuze umxholo ungafikeleleki ngaphandle kokuba sinesitshixo esihambelanayo. Kodwa kusenokwenzeka ukuba umkhupheli uvimba uhlengahlengiso lwayo, ukuthintela uphawu lwayo oluphambili ekuchaphazelekeni.
Kodwa ukukhuselwa kokufikelela okanye ukubonwa ayisiyiyo kuphela imida esinokuyifumana nolu hlobo lweefayile, kuba umdali unokunciphisa umda wokushicilelwa kwefayile, khubaza ikopi yokubhaliweyo xa uyikhetha, upapasho loxwebhu. .. Ngaphandle kokuba sinegama eligqithisiweyo lokuyenza. Kule nqaku siza kukubonisa iindlela ezahlukeneyo zokufikelela kumxholo weefayile, nokuba kukukhuphela isicatshulwa, ukuprinta okanye ukuyihlela. Kule nqaku siza kukubonisa iindlela ezahlukeneyo kunye neendlela zokukwazi ukuvula iifayile ezikhuselweyo kwifomathi yePDF, ukuba nje singabenzi bomxholo kodwa ngelishwa silibele igama eligqithisiweyo elisivumele ukuba senze njalo.
1 Izicelo zokuhlela iifayile zePDF
1.1 Hlela iifayile zePDF kwiWindows
1.2 Hlela iifayile zePDF kwiMac
2 Vula ifayile yePDF
2.1 I-SysTools PDF yokuvula
2.3 Ukuvula iPDF
Izicelo zokuhlela iifayile zePDF
Hlela iifayile zePDF kwiWindows
I-Adobe Acrobat Pro sesona sixhobo silungileyo esinokusifumana kwintengiso, kungekuphela nje ukwenza amaxwebhu e-PDF, kodwa nokuwahlela. Le software iyasivumela ukuba senze amaxwebhu alula akhuselwe ngegama eligqithisiweyo, ukugcwalisa iifom ezithumela idatha nge-imeyile kwifayile ebanjwe kwiseva. Yintoni egqithisile izixhobo zokucinezela asinika zona xa kuguqulwa uxwebhu kwelinye Iifomathi zePDF zezona zilungileyo, zinciphisa ubungakanani bayo ngendlela engakholelekiyo kwaye akukho xesha apho siya kuba nakho ukufumana usetyenziso simahla okanye iinkonzo zewebhu.
I-Adobe Acrobat Pro Esi sisixhobo iyafumaneka kuzo zombini iiWindows kunye neMac, Ke ukuba uhlala utshintsha amaqonga kodwa uhlala ufuna ukuba nesi sicelo, uya kuba lukhetho lwakho. Ukongeza, enkosi kwi-Adobe Document Cloud service, ungafikelela kwisicelo ngokuthe ngqo kwisikhangeli sakho, ukuze ekugqibeleni inkqubo oyisebenzisayo rhoqo ibe naphantsi kwengxaki.
Hlela iifayile zePDF kwiMac
I-Adobe Acrobat Pro sesinye sezixhobo ezilungileyo ezikhoyo kule njongo, njengoko benditshilo kwizicelo zokuhlela iifayile kwiWindows, kodwa ayisiyiyo kuphela esinokuyifumana kwinkqubo ye-Apple ecosystem. Olunye usetyenziso olukhulu olukhoyo lokuhlela kunye nokwenza naluphi na uhlobo loxwebhu kule fomathi sisicelo Ingcali yePDF, usetyenziso olufumaneka kwakhona kwindalo ye-iOS, nangona ngokulandelelana ngokusikelwa umda kunenguqulo ye-Mac.
Con Umchwephesha wePDF Sinokwenza naluphi na uhlobo lweefayile kule fomathi, kunye nokusivumela ukuba siguqule ngokukhawuleza naluphi na uxwebhu kule fomathi. Kodwa ayisivumeli kuphela ukuba sihlele amaxwebhu kule fomathi, kodwa ikwasivumela ukuba silawule imibuzo kumaxwebhu amaninzi ngokudibeneyo, eyenza ukuba ibe sisixhobo esifanelekileyo ukuba sinyanzelwe ukulawula olu hlobo lweefayile ngokudibeneyo rhoqo.
Vula ifayile yePDF
Okokuqala, kuya kufuneka uthathele ingqalelo iinkonzo zewebhu kunye nokusetyenziswa esikubonisa kona apha ngezantsi kuphela kwendlela esinokuzisebenzisa ukufumana ukufikelela kumaxwebhu ukuba besikade sivimbile kodwa ngelishwa silibele iphasiwedi. Naluphi na olunye usetyenziso olwenzayo kwezi nkonzo ngamaxwebhu akhuselweyo luya kuba phantsi koxanduva lwakho.
Ukuthintela iifayile kule fomathi Ayichaphazeli kuphela igama lokungena okanye ukuguqulwa kweefayile kule fomathi, kodwa iya kuvula nokusikelwa umda esinokukufumana xa sikopa kwaye sincamathisela umxholo kwesinye isicelo, ibhloko elisithintelayo ekushicileleni iifayile kule fomathi ...
I-SysTools PDF yokuvula
I-PDF Unlocker Iyafumaneka kuhlobo lwasimahla olunemiqathango okanye ngokuthenga usetyenziso lwamaxabiso ngama- $ 29. I-PDF Unlocker isivumela ukuba sisuse imiqobo esinokuyifumana njengokuprinta, ukukopa isicatshulwa, ukuhlela nokuthumela umbhalo kwezinye iinkqubo. Uncedisa i-128-bit kunye ne-256-bit encryptions ezisetyenziswa yi-Adobe Acrobat. Ngokucacileyo ukuba sinengxaki yokuvula uxwebhu kuba lonakele, usetyenziso alusebenzi imimangaliso kwaye nangolu hlobo nangasiphi na esinye isicelo siya kuba nakho ukufikelela kulo.
Ukusebenza kwesi sicelo kulula kakhulu, kuba kufuneka ukhethe iifayile esifuna ukuzikhusela kwaye isicelo siya kuthi ngokuzenzekelayo sikhathalele ukuphelisa lonke ukhuselo olufumanayo apha endleleni, ukuze xa ivuliwe Singenza nawuphi na umsebenzi ngoxwebhu.
Siqala ngeenkonzo zewebhu, iinkonzo zewebhu ezisivumela ukuba singavumeli ukusikelwa umda kwezinye iifayile kule fomathi ngaphandle kokufaka nasiphi na isicelo, into exatyiswayo ekuhambeni kwexesha. Enkosi Ku IPDF.com podemos susa izithintelo kwiifayile zePDF zokuprinta, ukukopa, ukuhlela… Le nkonzo isisiseko, ayizukusivumela ukuba sivule iifayile ezikhuselweyo nge-Adobe's 128 kunye ne-256-bit encryption. ThePDF.com isinika umsebenzi olula kakhulu, kuba kufuneka sikhethe uxwebhu ekubhekiswa kulo kuphela kwaye inkonzo yewebhu iyakubuyisela uxwebhu kuthi njengokukhuphela xa sele luhloliwe.
Ukuvula iPDF ivumela ukuba sivule iifayile zethu kwifomathi yePDF zombini kwihard drive yethu nakwiDropbox yethu okanye kwiakhawunti yeGoogle Drayivu. Ukuvula iPDF kuyafumaneka kwiwebhu nakwisicelo. Ngokusengqiqweni, uguqulelo lwewebhu lusibonisa uninzi lwezithintelo kunenguqulo yedesktop, ehambelana kuphela neWindows kunye neLinux. Ngokungafaniyo nezinye iinkonzo zewebhu, ukuvulwa kwePDF kusinika umda we-200 MB xa ususa izithintelo kwiifayile ezikhuselweyo.
Njengenkonzo yangaphambili, ILPPFF ivumela ukuba sivule iifayile ngokuthe ngqo kwikhompyuter yethu okanye kwi-Dropbox yethu okanye kwiakhawunti kaGoogle Drivkwaye. Le nkonzo yasimahla ivumela ukuba singavuli kwaye sifumane ukufikelela kwezona zithintelo ziphambili esinokuzifumana kule fomathi yefayile, njengokushicilela, ukukopa, ukuhlela ...
Enye yeenkonzo zewebhu ezibonelela ngezona ziphumo ezilungileyo kukuba Encinci, Inkonzo esivumela ukuba sisuse ngokukhawuleza kwaye ngokulula iphasiwedi kwiibhetshi ezivela kwiifayile ezikwiikhompyuter yethu, kwiakhawunti yeDropbox okanye kwiGoogle Drayivu. Ikwaqinisekisa ukuba zonke iifayile esizilayishayo kwiiseva zayo ziyacinywa ngokuzenzekelayo xa sele sizikhuphele kwaye ngokungena kwiwebhu kuyasivumela yisebenzise ngokungafaniyo kwiPC yethu ngeWindows, iMacOS okanye iLinux.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyivula njani ifayile yePDF
Uyenza kanjani uvavanyo lwesantya kuwo nawuphi na umsebenzisi
Isamsung iphendula nge-bang enkulu kumsebenzisi ogxeke i-Galaxy S8